Muuse Biixi oo Qaraxa Buuhoodle ka Tacsiyeey iyo Indhasheel oo yiri, “Somaliland baa qaraxa ka danbeysay” – Radio Daljir
Agoosto 2, 2018 3:37 g 0
Kaddib qaraxii xalay ee Buuhoodle, lalana beegsaday saraakiisha ciidanka Buuhoodle iyo abaabulayaasha dagaalka xoreynta Sool, laguna dilay Cabdifataax ina Rotman iyo Axmed Doolaal, ayaa saaka waxaa dhacdadaas ka tacsiyeey Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, asaga oo raggaas ku sheegay “inay ahaayeen muwaadiniin Somaliland.”
Isla saaka waxaa wareysi uu bixiyey madaxweynihii hore ee Khaatumo, Maxamed Yuusuf Jaamac (Indhosheel), uuna siiyey madasha #60 uu weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Buuhoodle ku eedeeyey isla maamulka Somaliland ee tacsiyeey, sheegtayna in raggaas ahaayeen “muwaadiniin Somaliland.”
Bishii Febraayo ee sannadkii 2011 ayaa Somaliland ku soo duushay gobolka Cayn ayada oo ay dheceen dagaalo aad u culus oo Somaliland ay galin ku qabsatay magaalada Buuhoodle, dagaaluduna ay ku sii fideen deegaanada Kalshaale, Hagoogane, iyo Maygaagle. Deegaanka Kalshaale ayaa xasuuqii ugu ba’naa ay Somaliland la beegsatay dadka deegaanka oo u badnaa dad reer guuraa ah.
Xasuuqa Kalshaale ayaa bartama magaalada Buuhoodle waxaa lagu xusaa, kana taagan Beebee dagaalka looga qabsaday Somaliland, iyo beerta “Xasuuso Xasuuqii Kalshaale.”
Indhosheel oo qaraxa lagu dilay nin-doorkii Buuhoodle ku eedeeyey Somaliland ayaa isla waraysigaas Madasha #60 ku sheegay in ay hayaan caddaymo rasmiya oo falkaas la xiriirinaya maamulka Somaliland, islamarkaana ay soo bandhigi doonaan caddaymahaas.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyey dhimashada masuuliyiinta reer Buuhoodle oo ayagu beryahaan xiriir sii xoogeysanya la lahaa Madaxtooyada Puntland, qaybna ka ahaa abaabulka dagaalka Tukaraq.
Puntland ayaa hore ugu eedeysay in hoggaanka Somaliland, ganacsatadooda, iyo kan al-Shabaab ay isku milmeen, ayna si wadajir ah masuul uga ahaayeen weerarkii Af Urur ee 8 Juun 2017, iyo kuwa joogtada noqday ee buuraha Calmadow. Madaxweyne Gaas iyo Madaxweyne Kuxigeen Camay ayaana horey si toos ah Somaliland ugu eedeeyey in “Somaliland ay gacansaar la leedahay al-Shabaab.”
Puntland illaa iyo hadda wax war ah kama ay soo saarin cidda ka danbeysay falkaas argaggaxa lahaa, ahaana kii ugu horreeyey ee ka dhaca Buuhoodle iyo deegaanka Cayn.
Dadka reer Buuhoodle oo sidii Khaatumo loo aasaasay kala dhantaalmay ayaa maanta u muuqda in dhacdadaan ay mar kale isku toli doonto.